IManchester City ihamba phambili | Scrolla Izindaba
IManchester City yelule umjaho wayo wokungahlulwa emidlalweni engama-26 emihle kakhulu kuyo yonke imiqhudelwano.
Ishaye iBorussia Mönchengladbach ngamabili eqandeni emlenzeni wokuqala we-UEFA Champions League e-Puskas Arena e-Budapest ngoLwesithathu.
Amagoli ashaywe ngumdlali wase-Portugal uBernardo Silva kanye noGabriel Jesus wase-Brazil abenele ukunika iCitizens isicoco samagoli amabili ekuhambeni abaya nawo emlenzeni wesi-2 e-Manchester.
Amaphuzu okuqala afike ngesikhathi ibhola elikhahlelwe nguJoao Cancelo lithola uBernardo Silva engamakiwe, okuholele ekutheni uSilva ahole iCity phambili ngokushaya igoli.
Imizamo yeGladbach ivinjezelwe ngabadlali basemuva u-Eric Laporte kanye noRuben Dias, iqembu lasekhaya elisondele ngesithende esidlule phambi kwegoli lika-Ederson.
IManchester City iphindaphinde kabili ukuhola ngesiwombe sesibili ngesikhathi uSilva ephenduka umhlinzeki kaGabriel Jesus oshaye igoli lokuqinisekisa ukunqoba kwe-19 kuyo yonke imincintiswano ngaphandle kokwehlulwa kanye nokunqoba kwe-12th ku-trot.
ICitizens ihola phambili ngokunqoba ngamagoli amabili ebuyela nawo e-Manchester ngethemba lokuthola ithuba lokuya kuma-quarter-final ku-UEFA Champions League.
Khonamanjalo, abaphumelele ku-UEFA Champions League amahlandla ali-13 iReal Madrid ishiye sekudlule isikhathi ukushaya abadlali abayishumi be-Atalanta ngelilodwa eqandeni emdlalweni womlenze wokuqala ukuze bathathe inzuzo yegoli lokuya e-Spain e-Atalanta Stadium e-Bergamo, e-Italy.
ITottenham ishaye iWolfsburg ngamane eqandeni ngamagoli ayisikhombisa abahola ngawo phambili uma sekuhlanganiswe onke amaphuzu, e-Tottenham Hotspurs Stadium kwi-UEFA Europa League.
Umthombo wesithombe: @manchestercity